TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Nov 15, 2002
·Dagaallo ay JWXO ku qaadday ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya
·Shirkii nabadeynta Soomaaliya oo weli calowsan!!
·Madaxweyne Isayas Afewerki oo booqasho ku tagey Dalka Maser.
·Ingiriiska oo beeniayy baaqii Meles Zenaawi ee Abaarta
·C/risaaq Xaaji Xuseen oo Itoobiya canbaareeyay
Dagaallo ay JWXO ku qaadday ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya
Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayay ciidamada geesiyiinta ah ee JWXO ku qaadeen dagaallo isdaba joog ah goobo ka mid ah saldhigyada ciidamada cadawga Itoobiya ee ay hogaamiyaan Wayaanuhu, waxaana dagaalladaas ka mid ah:
29.10. 02 Ciidamada Jabhada Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya ee sida gaarka ah u tababaran ayaa weerar mir ah ku qaaaday Ciidamada gumaysiga Itoobiya ee magaalada Dig ku sugan, waxayna halkaas kaga dileen 10 askari, 15 kalana way kaga dhaaweceen.
Isla wakhtigaas waxay ciidamada geesiyiinta ah ee Xoraynta Ogaadeenya weerar ku qaadeen Ciidamada Cadawga ee ku sugnaa magaalada Guna-Gado, waxaana halkaas lagaga dilay 9 skari, 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
31.10.02 Dagaal ay iskaga horyimaadeen ciidamada dacdarraysan ee ay hogaamiso EPRDF iyo ciidamada xaq u dirirka ah ee JWXO meesha lagu magacaabo Tontomi, oo ka tirsan gobalka Dhagaxbuur waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 7 askari, waxaana laga dhaawacay 13 kale.
Weerarradaas isdaba joogga ah ee ay ku qaadeen ciidamada wadaniga Xoraynta Ogaadenya kuwa isu-keenka ah ee Itoobiya waxay u keentay Niyojab, Baxsi iyo kala amar qaadasho la,aan ka dhex oogantay Ciidamada dhexdooda.
Ciidamo uu Gumaysiga Itoobiya ku soo uruuriyay 10.10.02 meesha lagu magacaabo Bohol-Xagarre waxaa ka baxsaday 30 Askari kadib markay u adkaysan waayeeyn weerarada aan kala go,a lahayn ee Ciidamada Wadaniga Xorenta Ogaadeenya ku hayaan iyo nolol xumo la soo daristay.
Dhinaca kale waxaa wali taagan khilaafkii Xarunta Gaaska 32aad ee Ciidamada Cadawga Itoobiya ee saldhigiisu yahay Magaalada Qabri-Dahare. Ciidamadan ayaa dhawr jeer oo hore dagaal dhex maray, ka dib markay wax amar ah kala qaadan waayeen, waxaana la soo xaqiijiyay inay Ciidamo badan labada dhinac ee iska soo horjeeda ka kala dhinteen, ku waas oo ay ka mid ahaayeen 6 Sargaal.
Shirkii nabadeynta Soomaaliya oo weli calowsan!!
Wararka ka imanaya magalaada Eldoret ayaa sheegaya in Shirkii dib u heshiisiinta Soomaliya uu weli ku jiro khilaaf lixaad leh oo ku saabsan qaabka loo qaybsanayo ergooyinka ka qayb galaya wejiga Labaad ee shirka.
Gudiga farsamada ee IGAD ayaa mar kale wax ka beddalay qaabka shaxda ee ergooyinka, hase yeeshee kooxihii markii horaba saluugsanaa ayaan wali ku qanacsanayn qaabka cusub ee shaxda loo sameeyay.
Waxay kaloo wararku sheegayaan in bannaanbaxyo ka dhan ah qaabka ergooyinka loo qaybiyay uu ka dhacay goobta uu shirku ka socdo, waxayna bannaanbaxayaashu tilmaameen in shaxada ergooyinku ay tahay mid ay Itoobiya wadato, oo loo sad-buriyay kooxaha iyada gacan-saarka la leh.
Dhinaca kale kooxda SRRC ee Itoobiya gacan saarka la leh ayaa la sheegayaa in khilaaf soo dhexgalay. Khilaafkaas oo ka aloosmey Jeneral Morgan iyo Jeneral Aaden Gabyow oo isku dhacay, arrintaasoo keentay, sida ay wararku sheegayaa, in Jeneral Aaden Gabyow uu ku biiro kooxda uu hormoodka u yahay Maxamed Qanyare Afrax, oo diiddan qaabka wax loo qaybiyay.
Si kastaba ha ahaatee waxaa cad in ay soo badanayaan codadka ka dhanka ah Dawladda Itoobiya ee ku wajahan shirka dib u heshiisiinta Soomaaliya, iyadoo hogaamiye kooxeedyada qaarkood soo jeediyeen in Itoobiya laga saaro Gudiga farsamada ee IGAD.
Madaxweyne Isayas Afewerki oo booqasho ku tagey Dalka Maser
Madaxweynaha wadanka Eritrea Mudane Isayas Afewerki ayaa Arbacadii la soo dhafey booqasho ku tagey Wadanka Masar, halkaas oo uu kulan kula yeeshay Madaxweynah Waddanka Masar Maxamed Husni Mubarak.
Labada Madaxweyne waxa ay ka wada hadleen xaalaadda Geeska afrika, gaar ahaan arrihama Soomaliya iyo Suudaan iyo cilaaqaadka labadooda wadan ka dhaxeeya.
Dhinaca kale dawlada Eritereya ayaa qaraar ka soo baxay Jaamacadda Carabta ku tilmaantay inuu ahaa qaraar aan daruuri ahayn, wuxuuna qaraarkani ka soo baxay kulan ay Axadii ina dhaaftay yeesheen Wasiirrada Arimaha dibada ee Dalalka Jaamacadda Carabta, kuwaasoo dawlada Eritereya uga digay inay faragelin ku samayso arrimaha gudaha ee dalka Suudaan.
Ingiriiska oo beeniayy baaqii Meles Zenaawi ee Abaarta
Haweenayda lagu magacaabo Clare Short oo ah Xoghayaha Xiriirka Caalamiga iyo Horumarintinta ee Dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in baahida laga sheegayo Itoobiya ay tahay mid aan jirin oo si aan masuuliyadi ku dheehnayna loo sheegay.
Haweenaydaas oo wareysi siisay Radiyaha BBC 4 ayaa sheegtay in dhibaatadu ka taagen tahay musuqmaasuq iyo maamul xumo ka jirta Wadankaasi Itoobiya.
C/risaaq Xaaji Xuseen oo Itoobiya canbaareeyay